Hallis: Dukumiintiyo uu Saxiixay Cristiano Ronaldo kadib Kufsiga uu kula kacay Gabadha Dacweyneysa | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Hallis: Dukumiintiyo uu Saxiixay Cristiano Ronaldo kadib Kufsiga uu kula kacay Gabadha Dacweyneysa
(08-10-2018) Waxaa lasoo bandhigay dukumiintiyo uu Saxiixay Cayaaryahanka dalka Portugal ee Cristiano Ronaldo xiligii uu kufsiga u geystay Gabadha dalka Maraykanka ee dacwada ku soo oogtey.
Wargeys ka soo baxa dalka Jarmalka oo lagu Magacaabo Der Speigel.ayaa soo bandhigay Warqadii uu Saxiixay Ronaldo xiligii laga wada baaray isaga iyo Katheryn Mayorga Cudurka dilaaga ah ee HIV sidoo kale waxa uu Saxiixay dukumiinti cadaynaya in uu kufsi geystey laakiin lagu heshiiyey in laqariyo markii uu lacag bixiyey.
Waxaa kaloo Wargeysku soo bandhigay Saxiixa Cristiano Ronaldo xili uu bixiyey 325,000 euros lacagtaas oo uu ku doonayey in laqariyo qaabkii uu u dhacay kufsiga uu gabdha u geystey waxaa kaloo Gabdhaan ay ku doodeysaa in Ronaldo uu uga tegay meel aysan raali ka ahayn isla Markaana aan weligeed looga galmoon sida ay hadalka u dhigtay.
Dukumiintigaan lasoo bandhigay ayaa cadayn u noqon doona dacwada halista ah ee lagu soo oogey Cristiano Ronaldo iyada oo gabdhaha Katheryn Mayorga ay sheegtay in ay hayso cadaymo kale oo badan oo muujinaya qaabka uu u dhacay kufsiga loo geystey.
Cristiano Ronaldo ayaa si isdaba joog ah u beeninaya dacwada loo haysto ee kufsiga ku saabsan waxaana uu sheegay sheekadaas ay kujiraan gacmo kale oo doonaya in ay sumcada ka dilaan isla Markaana ay ceebeeyaan isaga iyo qoyskiisa.